मार्केटिंगको परिभाषामा फर्कौं। मार्केटिंग अनुसन्धान, योजना, कार्यान्वयन, बढावा र उत्पाद वा सेवाहरूको बिक्री को कार्य वा व्यवसाय हो। सामाजिक मिडिया एक संचार माध्यम हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्री सिर्जना गर्न, सामग्री साझा गर्न वा सामाजिक नेटवर्कि inमा भाग लिन सक्षम गर्दछ। माध्यमको रूपमा सामाजिक मिडिया दुई कारणका लागि परम्परागत मिडिया भन्दा धेरै फरक छ। पहिलो, गतिविधि धेरै हदसम्म सार्वजनिक हो र अनुसन्धानका लागि मार्केटरहरूको लागि पहुँच योग्य हुन्छ। दोस्रो, मध्यम दुबै दिशात्मक संचारको लागि अनुमति दिन्छ - दुबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष।
एक कडा सोशल मिडिया मार्केटिंग रणनीतिले दुबै सोशल मिडियाको बिभिन्न सुविधाहरू समावेश गर्नुपर्दछ साथै विधाहरू मार्फत अनुगमन र प्रमोट गर्न सकिन्छ। यसको मतलव यो छ कि एक दिन २ ट्वीटहरु पुश गर्न रणनीति एक पूर्ण रूपमा समाहित सामाजिक मिडिया रणनीति होईन। एक पूर्ण रणनीतिले उपकरणहरू र विधिहरू यसमा समाहित गर्दछ:
ब्यापार परिणामहरू सँधै वास्तविक खरीद हुनुपर्दैन, तर तिनीहरू जागरूकता, विश्वास, र अख्तियार बनाउन सक्दछन्। वास्तवमा, सोशल मिडिया कहिलेकाँही सिधा खरीदहरू ड्राइभ गर्न इष्टतम माध्यम होइन।
सोशल मिडिया प्राय: मुखको शब्द, अनुसन्धानको लागि छलफलको स्रोत, र एक कम्पनीमा मानिस मार्फत सम्पर्क गर्नका लागि स्रोतको रूपमा खोजी गर्न प्रयोग गरिन्छ। किनभने यो द्वि-दिशात्मक हो, यो अन्य मार्केटिंग च्यानलहरूबाट अद्वितीय हो।
हेर्नुहोस् Martech Zoneको सामाजिक मिडिया तथ्या Inf्क इन्फोग्राफिक
बजार अनुसन्धान - मँ एक पोशाक निर्मातासँग अहिले काम गर्दैछु जसले उनीहरूको प्रत्यक्ष-देखि-उपभोक्ता ब्रान्ड अनलाइन सुरू गर्दैछ। हामी शीर्ष श्रोताहरूको बारेमा बोल्दा उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्ने कुञ्जी शव्दहरू पहिचान गर्न सामाजिक सुन्नको प्रयोग गरिरहेका छौं ताकि हामी त्यो शब्दावलीलाई हाम्रो ब्रान्डिंग प्रयासहरूमा समाहित गर्न सक्दछौं।
प्रतिष्ठा प्रबंधन - मसँग दुईवटा स्थानीय ब्रान्डहरू छन् जुन मसँग काम गरिरहेछु जुन हामीले उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि स्वचालित समीक्षा अनुरोधहरू सेटअप गरेका छौं। प्रत्येक समीक्षा स collected्कलन र प्रतिक्रिया गरीन्छ, र खुशी ग्राहकहरु लाई आफ्नो समीक्षाहरु साझा साझा गर्न धक्का गरिन्छ। यसले स्थानीय खोज परिणामहरूमा दृश्यता वृद्धि भएको छ।
सामाजिक प्रकाशन - म धेरै कम्पनीहरूसँग काम गर्छु जुन सामग्री क्यालेन्डरहरू ब्यवस्थापन गर्छन् र तिनीहरूको तालिका प्रयासहरू केन्द्रिकृत गर्दछ Agorapulse (म एक राजदूत हुँ)। यसले उनीहरूलाई धेरै समय बचत गर्छ किनभने तिनीहरू बाहिर जान र प्रत्येक माध्यम सिधा सिधा व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन। हामी समावेश गर्छौं अभियान UTM ट्यागिंग ताकि हामी हेर्न सक्दछौं कि कसरी सोशल मिडिया ट्राफिक र आफ्नो साइटमा रूपान्तरण ड्राइभ गर्दैछ।
सामाजिक संजाल - म सक्रिय रूपमा एक प्लेटफर्म प्रयोग गर्दैछु जसले मलाई प्रभाव पार्ने प्रभाव र संस्थाहरूसँग लि identify्कइनमा भाडामा लिन मद्दत गर्दछ। यसले मेरो बोल्ने अवसरहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ र यसले मेरो कम्पनीलाई यसको बिक्री बढाउन मद्दत गरेको छ।
मलाई थाहा छ कि तपाईं केहि जटिल सामाजिक मिडिया अभियानहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जुन मेरो विकल्पहरूसँग मेल नखाने तरिकामा प्रयोगहरू र माध्यमहरू समावेश गर्दछ। म केवल प्रत्येक माध्यमको केहि सामान्य उपयोगहरु बाहिर फाँट गर्दैछु कि तिनीहरु लाई कसरी बिभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न।
धेरै मार्केटरहरू शीतल मध्यमतिर वा तिनीहरू सबै भन्दा सहजै एक किसिमको गुरुत्वाकर्षण गर्छन्। यो एक दुर्घटना हुनको लागि प्रतिक्षा गर्दैछ किनकि उनीहरूले भरपर्दो माध्यमिक माध्यमलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतामा जोड्दैनन्।
तपाइँको ब्रान्ड प्रदर्शन गर्नुहोस् - मुखको शब्द अविश्वसनीय रूपले प्रभावी छ किनकि यो अत्यन्त प्रासंगिक छ। एक विशिष्ट उद्योगका व्यक्तिहरू, उदाहरणको रूपमा, अक्सर सोशल मिडिया च्यानलहरू र समूहहरूमा भेला हुन्छन्। यदि एक व्यक्तिले तपाइँको ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवा साझा गर्दछ भने, यो अत्यधिक संलग्न श्रोताहरू द्वारा देखी साझेदारी गर्न सकिन्छ।
ग्राहक सेवा सुधार गर्नुहोस् - जब तपाईंको ग्राहकले तपाईंलाई सहयोगको लागि बोलाउँदछ, यो १: १ कुराकानी हो। तर जब एक ग्राहक सोशल मिडियामा पुग्छ, तपाईंको दर्शकहरूले तपाईं कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ र उनीहरूको आवश्यकतालाई प्रतिक्रिया देखाउँछन्। महान ग्राहक सेवा विश्व को हरेक कुनामा मार्फत प्रतिध्वन गर्न सकिन्छ ... र ग्राहक सेवा प्रकोप गर्न सकिन्छ।
बिक्री विस्तार गर्नुहोस् र नयाँ दर्शकहरूमा पुग्नुहोस् - यो प्रमाणित छ एक सामाजिक मिडिया रणनीति outsell समावेश जो व्यक्ति बिक्री जो गर्दैनन्। साथै, तपाईंको बिक्री व्यक्तिहरू बिक्री प्रक्रियामा नकारात्मक प्रतिक्रियालाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर बुझ्दछन् किनकि उनीहरू दिनदिनै मानिसहरूसँग बोल्छन्। तपाईंको बजार विभाग प्राय: गर्दैन। तपाइँको बिक्री प्रतिनिधिहरु एक उपस्थिति निर्माण गर्न सामाजिक मा बाहिर राख्नु तपाइँको पहुँच विस्तार को एक भयानक माध्यम हो।
जबकि म जहिले पनि मेरो ग्राहकहरुलाई प्रत्येक सोशल मिडिया अभ्यासमा पूर्ण रूपले लगानी गर्न जोड दिँदिन, म लगानीमा निरन्तर फिर्ती देख्छु जब मेरा ग्राहकहरु आफ्नो प्रतिष्ठा ब्यबश्थापन गर्छन् र उनीहरूका अनुयायीहरुसँग अनलाइन मूल्य निर्माण गर्दछन्। जे भए पनि, सामाजिक मिडियाको शक्तिलाई वेवास्ता गर्नु भनेको ब्रान्डको जोखिममा हुन सक्छ यदि तिनीहरूले ग्राहक सेवा मुद्दालाई दुरुपयोग गरे भने। तपाइँका ग्राहकहरू तपाइँको उपस्थित हुन र प्रमुख सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा समयमै प्रतिक्रिया दिनको लागि अपेक्षा गर्दै छन् ... उपकरणहरू र रणनीतिहरू समावेश गर्नका लागि यो आवश्यक छ।
म अधिक सहमत गर्न सक्दिन, म संगीतकारहरूलाई मेरो भिडियो काम पिच गर्ने प्रयासमा भइरहेको एक पार्टीको रूपमा प्रयोग गर्छु! र तिनीहरू चासो राख्दछन् भने पनि तिनीहरू सही मानसिकतामा थिएनन्, मनपर्दैन जब तिनीहरू अनलाइन छन् र मेरो साइट फेला पार्छन् र मेरो कामलाई हेर्दै केही समय खर्च गर्दछन्, अब ग्राहकहरूले मलाई सम्पर्क गर्छन्।
जहाँसम्म प्रयोग गर्ने भिडियो आफैंलाई व्यक्तिगतकरण गर्न, यो केवल अनुक्रमणिका शब्दहरूको लागि पोष्ट लेख्नको लागि छडीमा रहनु उत्तम छ वा तपाईंलाई लाग्दछ कि ब्लगिंग पनि राम्रो विचार हो?
धन्यवाद! खोजीयोग्य सर्तहरू प्रदान गर्न भिडियोको साथ ब्लगि ofका फाइदाहरू अझै पनि मेरो पुस्तकमा एक विजेता हुन्। अल्पसंख्यक व्यक्तिले भिडियो खोजी प्रयोग गर्दछन् - र ती भित्र धेरैले भिडियोको राम्रोसँग वर्णन गर्न समय लिदैनन्।
यी दुईको संयोजन शक्तिशाली छ तर केहि समय लिन सक्दछ, यद्यपि। एक भिडियो ब्लग (पोडकास्टेबल) प्रकाशित गर्न सक्षम हुँदैछ, र प्रत्येक भिडियोको बारेमा ब्लगले तपाईंलाई फेला पार्ने संभावनाहरूलाई निश्चित रूपमा सुधार गर्नेछ!
उत्कृष्ट पोस्ट डग। मैले धेरै निजी व्यवसाय मालिकहरू सामाजिक नेटवर्कको दुरुपयोग गरेको देखेको छु। यो न केवल स्प्याम जस्तो देखिन्छ, तर यसले सस्तो स्पामको दुर्गन्ध गर्दछ। उत्तम दृष्टिकोण भनेको अनलाइन सामग्री निर्माण गर्न समय लिनु हो (ब्लग उत्तम विकल्प हो), विशेषज्ञता सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईंको पेशामा उत्कृष्टता देखाउनुहोस्, र खोजी परिणामहरू जित्नुहोस्।
डग यो एक महान पोष्ट हो। एकदम विविध वेब कम्पनीको रूपमा, हामी निरन्तर हाम्रो बिक्री र मार्केटिंग स्थिति बढाउन सोशल मिडिया प्रयोग गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्न कोशिस गर्दैछौं। मलाई लाग्छ कि तपाईंले सोशल मिडियाको दुरुपयोगको बारेमा केहि धेरै कडा मुख्य बुँदाहरूमा हिट गर्नुभयो, मलाई लाग्छ चीजहरू विज्ञहरूले पनि दिमागमा राख्नुपर्दछ।